ह्वाट्सएपमा नयाँ फिचर, पहिलेभन्दा सुरक्षित हुने कम्पनीको दावी, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
ह्वाट्सएपमा नयाँ फिचर, पहिलेभन्दा सुरक्षित हुने कम्पनीको दावी
एजेन्सी। ह्वाट्स एपलाई सामाजिक संजालको सबैभन्दा सुरक्षित एप मानिन्छ। यसले आफ्ना प्रयोगकर्ताहरुको डाटाको सुरक्षामा निकै ध्यान दिने गर्छ। यही कुरालाई ध्यानमा राखेर ह्वाट्स एपले प्रयोगकर्ताको लागि एक सुरक्षित फीचर ल्याएको छ।
खबर अनुसार कम्पनीले प्रयोगकर्ताको लागि फिंगरप्रिन्ट स्क्यान फीचर उपलब्ध गराएको छ। अब ह्वाट्स एपको प्रयोग पहिले भन्दा सुरक्षित हुने कम्पनिले बताएको छ। रिपोर्टको अनुसार यो फीचर एक्टिभेट गरेपछि तपाईँको एकाउन्ट अरु कुनै व्यक्तिले खोलेर हेर्न सक्दैनन्। अर्थात यदि कसैले तपाईँको फोन अनलक गरेपनि उसले तपाईको ह्वाट्स एप खोल्न सक्दैन्।
अहिले यो फीचर ह्वाट्स एपको ल्याटेस्ट भर्जन् २.१९.२०.१९ मा उपलब्ध छ। यदी प्रयोगकर्तासँग आईफोन एक्स छ भने त्यसमा फेस आईडी पनि उपलब्ध रहेको छ।